मच्छिन्द्रको रोमान्चक जित, अन्तिम मिनेटमा विजयी गोल
Tue, Apr 7, 2020 at 4:40am
लकडाउनमा गाडी चलाउदा अभिनेत्रीकाे दुर्घटना, अवस्था गम्भीर #आहा खबर# अब रहेनन् रियल र बार्सिलोनाका पूर्वप्रशिक्षक एन्टिक #आहा खबर# राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओली #आहा खबर# यसरी प्रवेश गरेकाे थियाे कञ्चनपुरमा काेराेनाकाे संक्रमण #आहा खबर# बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन आईसीयू भर्ना #आहा खबर# सावधान! कतै तपाइलाई काेराेना त छैन? यसरी थाहा पाउनुहाेस् घरमै बसेर #आहा खबर# विश्वमा काेराेना संक्रमितकाे संख्या साढे १३ लाख पुग्दा, ज्यान गुमाउने ७५ हजार #आहा खबर# नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारी नियुक्त #आहा खबर# फेरी ८ दिन थपियाे लकडाउन, अवतजावतमा थप कडाइ #आहा खबर# दुई हप्तापछि काेराेनालाई जितेर फर्किइन कनिका कपुर #आहा खबर# राष्ट्र बैंककाे नयाँ गर्भनरमा शिवाकोटी, अधिकारी र खनालको नाम सिफरिस #आहा खबर# चार पुरुष मृत फेला #आहा खबर# पहिलाे पटक बाघमा पनि देखियाे काेराेनाकाे संक्रमण #आहा खबर# काेराेनाकाे उच्च जोखिममा सुदूरपश्चिम #आहा खबर# थपियो कर बुझाउने म्याद, अब कुन कर कहिले बुझाउने ? #आहा खबर#
सोमबार, १४ पौष २०७६,	आहाखबर	2.1K
मच्छिन्द्र फुटबल क्लबले जारी शहिद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा अपराजित यात्रा कायम राखेको छ । नाइजेरियन फरवार्ड आडेलाजा सोमिडेले अन्तिम मिनेटमा गोल गरेपछि कतार एयरवेज सहिद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत चौथो चरणको पहिलो खेलमा सानमिगेल मछिन्द्र क्लबले न्यू रोड टिम (एनआरटि) लाई १-० ले पराजित गरेको छ ।
खेलकाे तेस्राे मिनेटमा एनआरटीका दर्शन गुरुङकाे प्रहार फितलाे बन्याे । १२ औं मिनेटमा पिटर सेगुनकाे हेडर पाेस्टबाट बाहिरिदा मछिन्द्र अग्रता लिनबाट चुक्याे । ३१ औं मिनेटमा रेजिन सुब्बाकाे क्रसमा विशाल राईकाे हेडरले पाेस्टकाे गति लिन नसक्दा मछिन्द्र अग्रता लिनबाट चुक्याे ।
३४ औं मिनेटमा पेनाल्टी क्षेत्रको ठिक बाहिर प्राप्त गरेको फ्रिकिकमा डिफेन्डर देवेन्द्र तामाङकाे प्रहार क्रसबारमा लागेर फर्कदा मछिन्द्रले अग्रता लिने सुन्दर माैका गुमायाे । त्यसमै रेजिन सुब्बा र अभिषेक रिजालकाे प्रयास एनआरटीका गाेलरक्षक अजित प्रजापतिले सहजै नियन्त्रणमा लिए । पहिलो हाफको इन्ज्युरी समयमा सुजल श्रेष्ठले ६ यार्ड बक्स भित्रबाट गरेको प्रहार गोलरक्षक अजितले बचाए ।
५३ औं मिनेटमा कप्तान प्रकाश बुढाथाेकीकाे पासमा दर्शन गुरुङले क्रस गरेकाे बललाई तपन कार्कीले गरेकाे प्रहार मछिन्द्रका गाेलरक्षक विशाल श्रेष्ठले सहजै बचाए । ५७ औं मिनेटमा एडिलाजा साेमिडेकाे प्रहार पाेस्टबाट थाेरै आकासियाे । ६१ औं मिनेटमा एनआरटीले खेलमा अग्रता लिने सुन्दर माैका खेर फाल्याे । काउन्टर एट्याकमा मैदानकाे मध्यभागबाट अफसाइड बिट ट्याप गर्दै तपन कार्कीले एक्लै बल अघि बढाउदै गरेकाे प्रहार दाेस्राेबारबाट थाेरै बाहिरिन पुग्याे ।
७४ औं मिनेटमा अभिषेक रिजालकाे सशक्त प्रहार एनआरटीका गाेलरक्षक अजित प्रजापतिले पञ्च गरेर बचाए । ८४ औं मिनेटमा अभिषेक रिजालकाे क्रसमा साेमिडेकाे हेडर पाेस्टबाट थाेरै बाहिरियाे । अन्तिम मिनेटमा सोमीडेले विजय धिमालको क्रसमा हेडरमार्फत गोल गर्दै मछिन्द्रलाई जित दिलाए ।
यस जितसँगै अपराजित रहेको मछिन्द्रले ४ खेलमा ३ जित र १ हारसहित कुल ९ अंक जोडेको छ । अघिल्लो सिजन अंक तालिकाको रेलिगेसन क्षेत्रमा रहेका कारण मछिन्द्रको १ अंक घटाइएको थियो ।
यस्तै एनआरटिको ४ खेलमा ४ खेलमा २ जित र २ हारसँगै ४ अंक भएको छ । एनआरटि पनि अघिल्लो सिजन पुछारमा रहेका कारण २ अंक घटाइएको हो ।